Virtual vendege, Please kubatsira!
kosha Virtual vendege, Please kubatsira!
2 makore 2 mazuva apfuura #249 by JanneAir15
Mhoro! Ndiri kuziva nezvevaya rakapotsa vendege. Ndatova kuziva chinhu pamusoro pavo saka pano ndizvo ndichiri kuda kuziva. Saka ndinoda kuziva chii zvirongwa zvaunazvo kuva uye kana ukaita kuziva chinhu zvimwe zvinhu zvinokosha ndinofanira kuziva ndiudzeiwo. Asi ndinofunga kuti zvose. Oh! uye kana uine imwe rakapotsa vendege vanorumbidza zvavari Welcome!
2 makore 2 mazuva apfuura #250 by Dariussssss
Chokutanga, kwaziwai uye kugamuchirwa kuna Forum.
Nokuti pakutanga, unofanira nendege Simulator. Pane vashoma vavo, uye kuti sarudzo kunobva PC une, zvakawanda chaizvo Microsoft Flight Simulators 2004 uye FSX, X-Plane uye P3D. Ndivo zvose payware, saka unofanira kufunga ichocho pamwe. Pane imwe freeware ndege sim, asi kuti yairwara zvakaipa, saka ini wont angazvinetserei kutsanangura nezvazvo.
Zvadaro zvichienderana vendege, iwe unenge uchida zvimwe ndege. Last mumwe, ndiye ACARS nemhosva. Iyewo zvichisiyana mumwe VA mumwe. Vamwe vane pachake, tsika vatengi vavo. Vaya regai, kunyanya kushandisa zvimwe nemakasitoma akwegura kwazvo uye zvakaipa wokusavimbika
Zvimwe pane kuti, ungada zvimwe wedzera-Ons kuvandudza zvimwe kutiza kwenyu sim, asi kufanana ndakati, ndizvo chete mukana.
2 makore 2 mazuva apfuura #251 by Gh0stRider203
Ini pachangu zvinoratidza FSX, kunyange panguva ino .... uchafanira kundoitora Via Steam kuti Semaziviro angu MS Haritsigiri dhisiki Version zvakare. Ndiri gonna pfocho .... mutengo Steam Edition chinhu freaking kuba! I akabhadhara $ 60 pamusoro FSX: Gold Edition (Deluxe + Yechipiri Wedzerai-mberi), uye iwe uri kubhadhara kure zvishoma saka ya. ONE marapirwo kuti hakusi payware ALL zvinoshanda, asi kuti ruzivo yangu ndiyo pfupi pasi.
Ndini Muridzi / CEO pakati American Airways VA chaizvoizvo uye paunenge munogamuchirwa kutenga chero payware ndege chaunoda, hatidi zvinoda kuti kutenga ndege kuva chikamu VA. KANA zvose zvaunazvo / kuda riri freeware, ndine inotonhorera pamwe kuti. Way I kuchiona ... upenyu inogona B zvakakwana tch dzimwe nguva, saka nei kuti zvimwe chete? lol
Ndiri nokururamisira akaisa-musana mukomana. Ndinoedza nepandinogona napo kushanda vezvikepe yangu, uye ndinoita kupa mamwe mibayiro vaya basa (kubvira bonuses "dzibvise" nokuva ndege basa chete navo). uri Takatowedzera kwakavakirwa on Chirungu (sezvo ari County lol) nzvimbo, uye kushandisa kwavo kutiza Tracking Software (ndiro nyore chaizvo kushandisa btw). Plus, ndinogona kukupa zvose freeware ndege tinoshandisa (kunyange vamwe zviri pamusoro pano lol)
Ndichiri kuita kunyanya-refu dhonza zvinhu, sezvo ndicho chinoita kuti VA kupfuura $, I kurega vezvikepe My vasarudze chii vanoda kuita.
Time chokusika peji: 0.196 mumasekonzi